आजको राशिफल / २०७६ आश्विन १४ गते मङ्गलबार - Purbeli News
आजको राशिफल / २०७६ आश्विन १४ गते मङ्गलबार
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १४, २०७६ समय: ६:५७:५७
वि.सं. २०७६ आश्विन १४ गते मङ्गलबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अक्टोबर ०१ तारिख, परिधावी नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : नवरात्रअन्तर्गत चन्द्रघण्टा भगवतीको पूजा आराधना गर्ने दिन, आजको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), आश्विन शुक्लपक्ष (कौलाथ्व) तृतीया तिथि, साँझ ०६:०० बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्थी तिथि, स्वाती नक्षत्र, बेलुका ०७:१२ बजेसम्म, त्यसपछि विशाखा नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), वैधृति योग, दिउँसो ०१:५० बजेसम्म, त्यसपछि विष्कुम्भ योग, सुरुमा तैतिल करण बिहान ०६:५२ बजेसम्म, त्यसपछि गर करण साँझ ०६:०० बजेसम्म, अन्तिममा वणिज करण, आनन्दादि योग : ध्वज, चन्द्रवर्ण : सेतो, चन्द्रदिशा : पश्चिम, योगिनीदिशा : आग्नेय, वारशूल : उत्तर, काठमाण्डौ, नेपालमा, सूर्योदय : बिहान ०५:५६ बजे, सूर्यास्त : साँझ ०५:४९ बजे, दिनमान : २९ घडी ४३ पला (११ घण्टा ५३ मिनेट, रात्रीमान : ३० घडी १७ पला (१२ घण्टा ०७ मिनेट)
राहु काल : दिउँसो ०२:५१ देखि ०४:२० सम्म, यमघण्ट : बिहान ०८:५४ देखि १०:२३ सम्म, गुलिक काल : दिउँसो ११:५२ देखि ०१:२१ सम्म, काल वारवेला : दिउँसो ०१:२१ देखि ०२:५१ सम्म, रोग वारवेला : बिहान ०५:५६ देखि ०७:२५ सम्म र साँझ ०४:२० देखि ०७:२० सम्म
लाभ वारवेला : बिहान १०:२३ देखि ११:५२ सम्म, आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
नवरात्रअन्तर्गत कूष्माण्डा भगवतीको पूजा आराधना गर्ने दिन, पञ्चाङ्गखण्ड समाप्त भएको छ, यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँअनुसार तिथि, नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ ।
आत्मबल र उत्साहमा बृद्धि हुने दिन छ । उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किन लागेको काम बन्नेछ । आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्ने छ । झैझगडा र बहसमा विजयी बन्नु हुनेछ । आशा गरेअनुरूप सहयोगी जुट्ने छन् । गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । इष्टमित्रको सुझावलाई पालना गर्दा रोकिएका काम बन्नसक्छ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । नयाँ मित्र बनाउन पाउँदा मन फुरुङ्ग हुनेछ, आत्मीय व्यक्तिसँग एकान्तमा रमाउन पाउनु हुनेछ । सवारी साधन प्राप्तिको योगसमेत छ ।
भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । मातृधन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । पढाइमा समय दिन सकिंदैन, यद्यपि कुनै नौलो र नयाँ विषयवस्तुको ज्ञान लिने मौका छ । बन्दव्यापारमा सामान्यतया फाइदा नै हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्ने समय छ । छैटौं भावमा चन्द्रमा भएकाले शरीरमा आवेग, क्रोध र रिसराग उदय हुने वेला छ, त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि मान्यजनको सुझाव र जान्नेबुझ्नेको राय ग्रहण गरेमा उपलब्धी हात पर्नेछ । तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुन्छ ।
केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ । वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ । टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिने छ । परिवारजन र करकुटुम्बका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । अनुकूल स्थानान्तरण र टाढाको यात्राको सम्भावना छ । प्रयत्न गर्दा मनग्ये फाइदा उठाउन सकिने दिन छ । विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने समय छ । मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ । सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर व्यक्तित्व निखार्न सकिने छ । बोलीमा मिठास भरिएको दिन छ, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ । कुनै चिट्ठामूलक काम बन्ने समय पनि छ ।
आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, हाँकेताकेका काम बन्ने समय हो । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिने छ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्ये लाभ हुनेछ । द्वेष वा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् । चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिने छ । सङ्घर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिने समय छ ।
बाह्रौं भावमा चन्द्रमा भए पनि लाभस्थानमा बसेको राशिस्वामी मङ्गलको शुभ प्रभाव रहेकाले अत्तालिई हाल्नु पर्ने परिस्थिति छैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ । हरदम सचेत र सतर्क रहनु पर्छ, नत्र समयमा होस नपुग्नाले हुनै लागेको आम्दानीमा बाधा पुग्न सक्छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीको चलखेललाई सँगीसाथीको मद्दतले तोड्न सफल भइने छ । कडा मिहिनेत र परिश्रमका बलमा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । होसियारीसाथ काम लिनुपर्ने समय छ । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिने छ । आस मारेको काम सुझबुझ र लगनशीलताका कारण बनाउन सकिने छ । कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्द्धामा भिड्दै हुनुहुन्छ भने आशावादी बन्ने समय छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ । मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ । तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ । धेरैले तारिफ गर्नेछन् । कीर्तिमानी काम सम्पादन हुनसक्छ । प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । घरगृहस्थीमा केही समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ । परिवारजनसँग असमझदारी बढ्नुका साथै काममा बाधा पुग्न सक्छ । राशिस्वामी बृहस्पति बाह्रौं भावमा रहेको तथा राशिमा नै शनिश्चर र केतु रहेकाले महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । माताको सहयोग र मातृधनकै उपयोगबाट लाभ उठाउन सकिने छ ।